Ukuphupha iPinapple Discover ➡️ Discover Online ▷ ➡️
Akukho sitolo sigcweleyo esinokulahleka, iinaninapple. Emva kwamagqabi ayo ajikelezayo nolusu olumdaka ngombala, ifihle umgubo omthubi, ubukhulu becala uswiti kwaye unencindi. Kubantu abaninzi, ipayinapile yindawo ephambili yesiqhamo esingaqhelekanga.
Kungenxa yoko le nto ifumana indawo yayo kwimenyu ngeendlela ezahlukeneyo zokubonisa: kwizaladi zeziqhamo, njengokuhonjiswa kwepitsa, njengejusi, njengeziqhamo ezomisiweyo okanye ezintsha. Wonke umntu unokukhetha indlela efanelekileyo kubo. Iphayinaphu iyathandwa kakhulu kwishishini lokutya kuba kufuneka ixhase okanye ikhuthaze ukunciphisa umzimba.
1 Uphawu lwephupha «iinanapple» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «iinanapple» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «iinanapple» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «iinanapple» - ukutolikwa ngokubanzi
Ukuba ubona okanye uthenge ipayinaphupha ephupheni lakho, ungalindela, ngokokuchazwa ngokubanzi kwephupha, ukuba kwikamva elikufutshane kuya kuba nemihlali kwaye iiyure ezimnandi. Kwakhona, unokulindela imeko ekhaya emnandi.
Iphayinaphu njengophawu lwamaphupha ikwaquka impumelelo kunye nolonwabo ebomini, kunye nobuchule obukhulu. Le propati iluncedo kulowo uphuphayo ngalo mzuzu kwaye uyazi ukuyisebenzisa ngobuchule.
Ukuchola ipayina enye okanye nangaphezulu ephupheni kuzisa ithamsanqa kunye nempumelelo kulowo uphuphayo. Ukuba uqokelela iinanapple ezivuthiweyo ephupheni, oku kungabonisa ukuba umntu olalayo ngowobomi bakho bakamva. ukhuseleko lwezezimali izicwangciso kwaye ke ngoko uzama ubutyebi. Ukutya ipayinapile njengephupha kufanekisela isimemo sokuqala kwitheko okanye kwenye indibano yoluntu.
Ukuba ubuthongo busika umnwe wakho ngelixa ulungiselela ipayina, kufuneka uzilungiselele ilahleko ebuhlungu ngaphakathi el mundo yomlindo. Nangona kunjalo, into enethamsanqa iya kuphuhlisa eya kuthi ibe negalelo kwimpumelelo yobuqu.
Uphawu lwephupha «iinanapple» - ukutolikwa kwengqondo
Uhlalutyo lwengqondo lwephupha libona kumfanekiso wephupha «iinanapple» uphawu lwe Ukuzithemba kunye nobomi bengqondo obunocwangco. Ukufumana iinanapple ephupheni kuzisa imo yovuyo ngekamva.
Iphayinaphu njengophawu lwephupha inokuqhubeka ukubonisa ukuba umphuphi uya kuphumelela kwizicwangciso zakhe kwihlabathi lokuvuka. Le mpumelelo iya kukunceda wonwabe ngobomi kwaye ububone kwicala labo elithandekayo.
Imeko yesiqhamo ikwanomdla kutoliko lwepayina. Ukuba iinanapple ivuthiwe, inencasa kwaye inencasa ephupheni, isetyenziswa njengophawu lokuqinisekisa, Yonwabela ubomi kunye nokwaneliseka ngokwesondo.
Ipayinapile ebolileyo, ebabayo, necekisekayo okanye engadliwayo, kwelinye icala, ibonisa ukungazithembi, ukuswela, kunye nokungoneliseki ngokwesini okanye ukuphoxeka.
Uphawu lwephupha «iinanapple» - ukutolika kokomoya
Ukuthetha ngokwasemoyeni, uphawu lwephupha "uphayinaphu" lunokubhekisa kuphuhliso olutsha. Ideas kwaye uchaze izicwangciso ebomini bokuvuka. Umphuphi unokuyisebenzisa ukubonisa ubuchule kunye nobuchule bokuyila.